KPET DR6000 Vet isilwane isilwane esimweni digital X ray-DR uhlelo - China HD Medical Technology
KPET DR6000 Vet isilwane isilwane digital esimweni X-ray uhlelo imaging DR
umklamo Standard embhedeni ebusweni nge ezahlukene ebanzi kwesicelo kufanelekile ukuhlolwa ngoba zonke izilwane amancane, aphakathi nendawo kanye enkulu. I zobuchwepheshe obuphambili esiyinhlanganisela izinto asetshenziselwa embhedeni ebusweni, kanye material has impahla bhala ukumelana futhi kulula ukuhlanza. Isilinganiso esithathwa iyavuleka-X-ray uphansi.
Isizukulwane esisha yobukhulu enkulu digital flat panel umtshina ngaphandle splicing, imitshina nge yobukhulu enkulu "17 × 17" silicon amorphous (Usayizi pixel: 127 μ m nesithombe yokufuna isikhathi: 4 ~ 6 imizuzwana) is amazwe emaphaketheni okoqobo kusuka Korea futhi lifinyelele ezingeni zobuchwepheshe ehamba phambili emhlabeni wonke. It has ephakeme ukuzinza kanye nesinqumo ratio futhi ine izici ephezulu, ukuphila isikhathi eside, ephakeme ukusebenza izindleko isilinganiso ngesikhathi esifanayo, kanjalo ukuhlangana ukusetshenziswa emitholampilo futhi akhulule abantu ngaphandle kokukhathazeka.
Kukhona core processing image ubuchwepheshe kusuka HD Medical kanye othomathikhi iwindi ukulungisa, umsindo ukunciphisa futhi automatic transmission ingafinyelelwa isithombe. Enamandla processing image umsebenzi kuveza imiphumela engcono ngcono, ukucwengwa, kanye nokwehla umsindo.
Ukusekela uhlelo ohlwini Umsebenzi:
It has imisebenzi ukuze isithombe wenzuzo, ukwanda nokwehlisa isithombe, ukulungiswa yesithombe ukukhanya, ukuhlela isithombe Ngokuphambene, isithombe ukujikisa, isithombe liyaphenduka futhi VHS nokukala; I workstation inomsebenzi we othomathikhi nokuvikeleka isipele isithombe, olusekela izindlela indlela eyodwa noma indlela ezimbili; I Dicom3.0 isithombe transmission, uphenyo, edition, ukunyatheliswa ingatholakala kulesi simiso. DR uhlelo ungakwazi ukuphatha nesineke futhi ulwazi isithombe;
Flat panel umtshina Japan Toshiba, 17 '* 17' amorphous Silicon (FPD) Cesium iodide 1 isethi
esiteshini Umsebenzi: isihenqo grade ikhompyutha Technical, 2M HD 1 isethi
Software software isilwane 1 isethi
embhedeni Animal No.6 embhedeni, iphaneli Ungahambisa ezine isiqondiso tube ikholomu ukuhambisa up and down kagesi 1 isethi
High voltage generator 220V, 320MA, 32KW 40-150kv Made in China (Neusoft brand) 1 PC
X-ray tube ayiphoyinti: 0.6 * 1.2 Tube voltage 40-150KV. Toshiba brand 1 PC
Laser ifilimu iphrinta Kodak 5700C 1 PC
umbiko Paper iphrinta ezimibalabala 1 PC
Hlunga igridi Imported JPI 1 SET
Isikrini sokuthinta HD Medical 1 PC
Post-processing emsebenzini esiteshini Ikhompyutha software 1 SET
Sibona Remote 3KW UPS powder, ungahambisa phezulu naphansi. 1 SET
Ithuluzi ibhokisi HD Medical 1 SET
High voltage ikhebula 75KV 2PCS
amandla ikhebula isigaba 3wires Amabili 1 PC
Collimator Okubalulekile Animal 24V 1 PC
Amandla amplifier: Kwenziwe eshayina 1 SET
abanye Packing ibhokisi, umhlaba wire 1 SET
Previous: KPET DR6500J Vet wezilwane isilwane isilwane digital esimweni X ray uhlelo idivayisi DR
Okulandelayo: KPET DR5500 Veterinary isilwane isilwane digital esimweni X uhlelo ray imishini
Digital Radiography Veterinary X-Ray Izinsiza kusebenza
Digital X Ray Machine Veterinary Inani
Zezıhlabane Okuthengisa Veterinary Digital Radiography
Radiography Veterinary X -Ray Izinsiza kusebenza
Veterinary umzimba womuntu Ithebula
Veterinary Imaging Izinsiza kusebenza
Veterinary tabel Ukuze X-Ray
KPET DR4500 Veterinary isilwane isilwane umsakazo digital ...
KPET DR4500J Veterinary isilwane isilwane Radi digital ...
KPET DR6500 Vet isilwane wezilwane isilwane digital ...
KPET DR6500J Vet isilwane wezilwane isilwane digital ...